Sady Tsy Gaoma No Tsy Pizza Fa Fanamiana Lalao Olaimpika Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Sady Tsy Gaoma No Tsy Pizza Fa Fanamiana Lalao Olaimpika Iraniana
Voadika ny 03 Aogositra 2016 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, 日本語, اردو, English
Eto ankavia, fanamiana Olaimpika Iraniana novaina vaovao, navoakan'ny Kaomitin'ny Lalao Olaimpika ao amin'ny firenena. Eto ankavanana, ny fanamiana Olaimpika Iranianina voalohany.
Nandrasan'ny vahoaka akaiky ny ho fanamian'ny ekipa Iranianina raha eo ampanomanana ny Lalao Olaimpika izy ireo ao Iran. Betsaka ny fitarainana rehefa navoaka ny fanamiana fa natao maimaika ny fijery azy na toy ny fanamiana any an-tsekoly zara fa vita. Nanamarika mihitsy aza ny mpanolotra Iraniana malaza iray fa misy itovizana amin'ny gaoma [famafana] ilay akanjo.
Nisy avy eo ny mpamorona [mpanjaitra] vaovao nantsoina mba hanova ny bikan'akanjo. Saingy mbola tsy naharesy lahatra ireo mpiseran'ny media sosialy Iraniana izany. Ho an'ny maro, na izy ireo misafidy fanamiana toy ny gaoma na toy ny [mpitondra] pizza.
Mamintina ny valinteny tao amin'ny media sosialy ny lahatsary eto ambany tamin'ilay endrika fanamiana voalohany manga sy volon-daoranjy. Manomboka amin'ny sary sainan'ny vondrona mpitolona mahery vaika ISIS ny lahatsary, ary hoy ny mpitantara:
Nitonona ho tompon'andraikitra tamin'ny famolavolana ny fanamiana Olaimpika Iranianina ny Daesh [ISIS].
Nitohy tamin'ny fitanisàna avy amin'ireo mpisera media sosialy ny fitantarana .
Tsy tsara noho ny fanamiana any an-tsekoly akory ilay fanamiana… Tsy mba hanao ilay izy aho na dia hoe handeha hividy yaourt any amin'ny fivarotana eto amin'ny manodidina … Tsy tsara aseho eny amin'ny “fampirantiana” akory izany.
Mampahatsiahy ny lahatsoratra Instagram malaza nataon'ny mpanolotra tantara mampihomehy Iranianina Rambod Javana ny lahatsary, mampiseho ny fanamiana eo akaikin'ny gaoma Pelikan iray izy amin'izany. Ny vokany? Eny, ianao ihany dia afaka hitsara azy;
“Enga anie ka hanana faharetana sy fandeferana ny ekipa Olaimpika antsika…Tena marina, mashallah ho an'ireo manampahefana tamin'ny safidy ny famolavolana izany. Raha ny fiofanana sy ny ezaka mafy efa nataon'ireo atletantsika… ary avy eo izy ireo halefa tahaka an'io ny fijery azy any amin'ny Lalao Olaimpika ?” Nampiseho ny fanamiana teo akaikin'ny gaoma Pelikan iray tao amin'ny Instagram ny mpanolotra mpanao fampihomehezana Iraniana Rambod Javan .
Taorian'ny fanaovana tsinontsinona ny fanamiana matroka tamin'ny ankapobeny, nokaramaina mba hanatsara an'ilay fanamiana ny mpamorona [mpanjaitra] vaovao Kamran Bakhtiary ary nanambaran'ny Komity Olaimpika Iraniana tao amin'ny Twitter ny fanavaozana :
Manao ilay fanamiana Olaimpika i #Ehsan_Rouzbahni sy #Mahsa_Javar.
Kanefa mbola niatrika tsikera ihany ny bika vaovao. Nampitaha ny fanamiana vaovao tamin'ny sakafo italiana ny mpanesoeso Iraniana Kioomars Marzban :
Nivoaka ny fanamiana Olaimpika vaovao | Te ho karazana pizza inona ianao izao ?
Nangataka ireo mpanara-dia azy hifidy ny fanamiana tiany ny mpisera Instagram lady_ati , izay naka sary an-tsaina izany ho toy ny mpilalao sarimiainan'ny ankizy:
Mivaky toy izao ny soratra: “#Ny_safidinao_momba_ny_bikan_ny_fanamiana _Olaimpika_avy amin'i_Kamran_Bakhtiary. Nanapa-kevitra ny hanampy ny komity tamin'ny alàlan'ny fitsapana ny ekipa Olaimpika. Aleo hojerentsika iza no bika be mpisafidy, ny fanamiana Olaimpika voalohany sa ilay iray noforonin'i Mr. Bakhtiary. Ho ahy manokana, ilay voalohany no tiako. Ary ianao? Ilay voalohany sa ilay faharoa ?”
Nivoaka tao amin'ny fahanginany ny farany ny mpamorona voalohany, Mahnaz Armin tamin'ny “fanaovana kitoatoa” ny famoronany. Namoaka pikantsarin'ny fanehoan-keviny ilay mpisera Instagram enaytialireza.
Nilaza i Armin tamin'izany fa nandrava ny endri-pamoronana ny fampihenan'ny Komity Olaimpika ny vola lany. Nanoratra izy fa nalaina taminy ny tetikasa ary nomena ny mpahaibika tanora tsy manana traikefa. Tsy hita tao amin'ny aterineto intsony ny fitantaran'i Armin nanomboka tamin'izay.
Nanoratra i Enaytialireza hoe: ” ny mpamorona matihanina no lasa maimbo — olona izay tsy azon'ny kolikoly…”
Farany, nanivaiva ny famoronana vaovao tao amin'ny siokany ny mpisera Twitter @Aghajoon tamin'ny alàlan'ny fampisehoana zaza iray miakanjo voatavorano.
“Nanambara i #Kamran_Bakhtiary fa novaina ny fanamiana Lalao Olaimpika. Ity ny famolavolana vaovao. Noho izany aoka tsy hisy hitaraina – tsy te hanankorontana ireo atleta izahay”
Raha te hanaraka momba io tantara io bebe kokoa , jereo ny fandrakofana ao amin'ny IranWire sy ny BBC .